MUUQAAL: Sirta Turkigu uu Dalalka Carabta ee Qaniga ah ku dhaafay Iyo Soomaalida waxa la gudboon | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Sirta Turkigu uu Dalalka Carabta ee Qaniga ah ku dhaafay Iyo Soomaalida waxa la gudboon
Istanbul ( Kalshaale ) Dalka Turkigu wuxuu ka mid yahay dalalka Caalamka ee Mudooyinkii ugu dambeeyay ku tallaabsanaya Horumarka kala duwan, sidoo kalana wuxuu dalka Turkiga Xooga saaray inuu gaadho Isku Filnaansho Buuxa.
Wuxuu siwayn kor ugu qaaday wax soo saarka dalka, wuxuu daboolay inta badan baahidii bulshadu u qabtay in dalal shisheeye ay wax kala soo degaan, Wuxuu sidoo kale Turkigu Horumar iyo isku Filnaansho ka gaadhay dhinaca difaaca, Wax soo saarka Hubka Noocyadiisa kala duwan, Iyadoona ay dhowaan Caalamka uga yaabsaday Diyaaradaha aan duuliyuhu wadin, oo Guulo waawayn kasoo hooyey dagaalo ka dhacay suuriya iyo Liibiya.
Dhinaca kale dalalka Carabta oo ka dhaqaalle badan dalka Turkiga marka loo eego shidaalka ay haystaan, Iyo Tirada dadkooda oo aad u yar, hadana ma aysan gaadhin wax isku filnaansho ah oo waxkasta oo ay u baahan yihiin dibadda ayaa looga keenaa . Hadiiba la dhaho hubka la idinka iibin maayo, Lacagta miyay cunayaan ?. Sidoo kalana Qorshe kama aysan yeelan wax soo saarka dalkooda.
Waxaa Tusaalle kuugu filan dalka Qadar oo markii 2017 Cunaqabataynta la saaray , Caanaha ay Cabaaan dalka Turkiga looga soo qaaday, sidoo kalana uu turkigu la garab istaagay ciidamo ka difaacay inaan dalkaasi la qabsan.
Barnaamijkan oo Xog badan Xambaarsan waxaad sidoo kale ku daawan doontaan Waxa la gudboon Bulshada Soomaaliyeed, Qaabka ay wax ku dooranaysa, Qabiilka Qof wanaagsan sida looga Xulan karo, iyo Arimo kale oo Xiiso badan.
Dagaalo Qadhaadh oo maalintii Labaad Dhexmaraya Dalalka Azerbaijan iyo Armenia
Muqdisho ( Kalshaale ) Dagaalka u dhaxeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa galay ...
London ( Kalshaale ) Magaalada Melbourne oo muddo ku dhow sedex bilood Bandow saarnaa ...